isayensi kunye netekhnoloji | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: isayensi kunye nobuchwepheshe
Ixabisa malini iPS3? Ikhonsoli yePS3- ixabiso
Emva kwempumelelo ye-PlayStation kunye ne-PlayStation 2 kaSony, ekhutshwe ngo-1994 nango-2000, ngokulandelelana, ukubonakala kwemodeli entsha kubonakala kungumcimbi wexesha. Amarhe okuqala ngomdlalo omtsha ...
I-alarm ye-Burglar: ukufakwa kunye nokufakwa
I-alamu yokhuseleko siseti yezixhobo zobuchwephesha ezazisa ngokungena ngokungekho mthethweni kwindawo yabucala. Kwangelo xesha, ikhupha isandi esothusayo kwaye igqithise ulwazi kwikhonkco lokhuselo. Kwilizwe lanamhlanje…
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 30.10.2019
Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, umnxeba onoqhagamshelo lwe-Intanethi, izibuko le-infrared, okanye itekhnoloji yeBluetooth yayiyinto engaqhelekanga. Ngoku yonke le misebenzi iqhelekile, kwaye eminye yayo ...
I-nanotechnology ekhaya kunye nakwishishini
Yonke imihla sisondela kuguquko olungenakuphepheka oluphethe i-nanotechnology. Sakha izixhobo ezitsha, sifumana izinto ezizodwa esingakhange sicinge ngazo ngaphambili. Ukusetyenziswa kwe-nanotechnology kubomi bemihla ngemihla kuvunyelwe ...
I-Lenovo B590 iNcwadana yeMigaqo: imigaqo, uphononongo kunye nokuphononongwa
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 07.10.2019
Uthotho lwe-B590 lungahlelwa njengeelaptops ezilungileyo zohlahlo-lwabiwo mali, xa uthenga into ekunganyanzelekanga ukuba ungene ematyaleni okanye kwimali mboleko. Kodwa ngaphandle kwexabiso eliphantsi (i-15-20 lamawaka engange), ilaptop ...
I-Samsung Wave 525: imigaqo, useto, uphononongo. Unokukhanya njani? I-Samsung Wave 525 ayivuli: njani ukuphinda uqalise?
Akusiyo imfihlo ukuba isabelo sengonyama siqwalaselwe kwii-smartphones eziphezulu, ezothusa wonke umntu ngokusebenza kwazo ngokugqithileyo kwaye kungabikho xabiso liphakamileyo. Nangona kunjalo, ngokuchasene nazo zonke iingxaki, ukuthengisa ikakhulu ...
Amandla okucoca indawo yokucoca. Izixhobo
"Luvela phi uthuli?" - umbuzo ungunaphakade kwaye kunokuba uphendule. Akukho mntu uyaziyo impendulo kuyo, kwaye umntu kufuneka alwe nesi sibetho phantse yonke imihla, ngakumbi kumagumbi esixeko. ...
Abaqulunqi beyogathi elungileyo: umlinganiso, iimodeli ezithandwayo, ukhetho
Indlela yokuphila esempilweni edityaniswe nesondlo esifanelekileyo iyaxhaphaka namhlanje. Nabani na obeka iliso kwinkangeleko yabo nakwimpilo-ntle yabo uyazi ukuba yeyiphi indima yeemveliso zobisi ezinegwele ekusebenzeni komzimba. KU…
Umatshini wokuhlamba ogwenxa. Ukungasebenzi kakuhle komatshini wokuhlamba
Umatshini wokuhlamba unomkhwa wokonakala. Rhoqo umniniyo akazi ukuba yintoni unobangela wokonakala, kwaye ubambe ngokukhawuleza umnxeba ukufowunela inkosi. Ngokomgaqo, yonke into ichanekile. Kodwa ingxaki ...
Iiprankers azihlali zihlekisa. Ngoobani ii-prankers kwaye kutheni amaxhoba e-prank ehlala esilela ukuqonda uburharha bawo?
Kwihlabathi lanamhlanje, umnxeba, iselfowuni okanye umnxeba wasekhaya, kudala wayeka ukuba yindlela yonxibelelwano nosapho kunye nabahlobo. Isetyenziswa ziibhanki ngokukhankasela abathengi, ukuvota kuqhutywa rhoqo. Ngaphandle…
I-Prestigio Multipad 4: Inkcazo yethebhulethi kunye nokuphononongwa
Ke, namhlanje siza kunikwa ithebhulethi ebizwa ngokuba yi-Prestigio Multipad 4, inqaku kukuba esi sixhobo kudala sikholisa abathengi. Kodwa yintoni kanye kanye? Ngaba uPrestigio uyakhululwa ...
Ungawenza njani umbethe wesinyithi ekhaya usebenzisa iindlela eziphuculweyo?
Ukuvumba kokubhadula, ivumba lokuzonwabisa, okanye ukulahlwa kwepropathi yakho yasebukhosini kwiinduli ezahlukeneyo kungacebisa ukuba uthenge isixhobo esikhethekileyo. Iingcali zetsimbi zobuchwephesha, uphononongo lwazo olwaziwa ngumntu wonke, kufanelekile ...
I-Smartphone Explay Rio ("Explay Rio") - uphononongo lwabanini, ixabiso, iifoto kunye neempawu zemodeli
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 01.10.2019
Namhlanje, ii-smartphones zebhajethi ziqala ukufumana ukuthandwa kakhulu. Oku kuyaqondakala, kuba ngenkangeleko phantse azifani kwiiflegi kwaye kwangaxeshanye zitshiphu. Ngokwendalo, ngenxa yexabiso olifunayo ...
Page 1 Page 2 ... Page 222 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-78 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-1,528.